Nagarik News - कक्षाकोठाले बालबालिकालाई मुटुरोगी बनाउला है
होमपेज / समाज / कक्षाकोठाले बालबालिकालाई मुटुरोगी बनाउला है
कक्षाकोठाले बालबालिकालाई मुटुरोगी बनाउला है	01 May 2013 | 09:34am बुधबार १८ बैशाख, २०७०
काठमाडौं - नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुसँगै आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना गर्ने विद्यालयको शुल्क र विद्यालय भवन हेर्दै हिँड्नु भएको छ भने एकपटक कक्षाकोठा पनि छिर्नुस्। घाम नलाग्ने तथा हावा नचल्ने कोठामा धेरै विद्यार्थी राखेर पठाउने गरिएको छ भने बेलैमा सचेत हुनुस्। त्यस्तो कक्षाकोठा तपाईंको छोराछोरीलाई मुटुरोगी बनाउने कारण बन्नसक्छ। विशेषज्ञका अनुसार बालबालिकामा हुने मुटुरोगको प्रमुख कारण विद्यालयका कक्षाकोठा तथा भीडभाड बन्ने गरेको छ। अधिकांश अभिभावकले राम्रो पढाइका लागि भन्दै भीडभाडयुक्त स्कुल रोज्ने र त्यस्ता स्कुलमा एउटै कोठामा धेरै विद्यार्थी कोचेर पढाइने भएकाले मुटुरोगको जोखिम बढिरहेको छ। 'भीडभाड तथा घाम नलाग्ने र हावा नछिर्ने कक्षाकोठा बाथ मुटुरोगको प्रमुख कारण हो,' वीर अस्पतालका बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मीले भने, 'घरको कोठा पनि उज्यालो र हावा खेल्न सक्ने खालको हुनुपर्छ।' कक्षाकोठा अध्यारो र चिसो भएमा बालबालिकामा घाँटीको संक्रमण देखिने र त्यसले बाथ ज्वरो गराउन सक्छ। पटक–पटक दोहोरिने बाथ ज्वरोले मुटुको भल्भ कमजोर बनाउँदै लैजान्छ। 'यस्तो अवस्थामा तत्काल बाथ मुटुरोग भएन भने पनि मुटु कमजोर भई भविष्यमा संक्रमण बढ्ने खतरा हुन्छ,' डा. रेग्मीले भने। चिकित्सकका अनुसार त्यस्ता कक्षाकोठामा संक्रमण दोहोरिने सम्भावना हुन्छ। गंगालाल हृदयरोग केन्द्रका कन्सलटेन्ट कार्डियोलोजिस्ट डा. यादवदेव भट्टले पनि बालबालिकाका लागि भीडभाडको वातावरण जोखिमयुक्त हुने बताए। 'घरमा पनि सानो कोठामा धेरै जना बसिन्छ र बालबालिकामा बारम्बार घाँटीको संक्रमण भइरहन्छ भने ख्याल गर्नुपर्छ। धेरै विद्यार्थी बस्ने कक्षकोठामा पनि जोखिम हुन्छ।' धेरै अभिभावकले आफू सुहाउँदो शुल्क र विद्यालयका नतिजा हेरेर विद्यालय रोजे पनि बालबालिका पढ्ने कक्षाकोठा कस्तो छ भनेर हेर्ने गरेका छैनन्। चिकित्सकका अनुसार चिसो कक्षाकोठामा पढ्ने बालबालिकाको रोग प्रतिरोध क्षमता कमजोर हुने भएकोले व्याक्टेरियाले बारम्बार आक्रमण गर्छ। सामान्यतः कक्षाकोठाको तापक्रम २२ देखि २४ डिग्री हुनु उपयुक्त मानिन्छ।चिकित्सकका अनुसार बी हेमोलिेइटिक स्टेप्टोकोकस ए नामक कीटाणुको संक्रमणले बालबालिकामा घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने भएमा बाथज्वरो र बाथ मुटुरोग हुनसक्छ। यस्तो ब्याक्टेरिया भीडमा बस्दा एक जनाबाट अर्कोमा सर्नसक्छ। सामुदायिक विकास प्रवर्तन केन्द्रका अध्यक्ष प्रकाशसिंह अधिकारीले प्राथमिक तहका बालबालिकालाई मापदण्ड अनुसार कक्षाकोठा व्यवस्था नगरिएको बताए। तराईका कतिपय जिल्लामा एउटै कोठामा १ सय ५० जनासम्म राखेर पढाउने गरेको पाइएको छ। उनले भने, 'एकै ठाउँमा धेरै साना बालबालिकालाई कोचेर पढाउनु एकातिर स्वास्थ्यको दृष्टिले जोखिम हो, अर्कोतिर त्यस्तो ठाउँमा गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सम्भव हुँदैन।' विज्ञहरूका अनुसार सरकारले बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय निर्देशिका जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। चिकित्सकका अनुभवमा धेरै अविभावकले बारम्बार घाँटीको संक्रमण भइरहँदा पनि सधैं भइरहने र एक सातामा निको हुने समस्या ठानेर हेलचक्रयाइँ गर्ने गरेका छन्। 'साधारण ज्वरो देखिए पनि मुटुलाई विस्तारै बिगारिदिने भएकोले स्कूल जाने उमेरका केटाकेटीले घाँटी दुखेमा र ज्वरो आउँदा लापरवाही गर्नु हुँदैन।' घाँटीको संक्रमणको समयमै उपचार गरेमा बाथ मुटुरोगको समस्या रोक्न सकिने रेग्मीको भनाइ छ। विशेषगरी ३ देखि १५ वर्षको उमेरमा बारम्बर घाँटी दुखेमा घाँटी दुखेको एकदेखि चार सातापछि ज्वरो आउनसक्छ। ज्वरो आउँदा एकपछि अर्कोगरी हातखुट्टाका जोर्नी दुख्ने र सुन्निन सक्छ। यस्तो ज्वरोलाई बाथ ज्वरो भनिन्छ। बाथ ज्वरो भएका ५० प्रतिशतलाई मुटुरोगको जोखिम हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रति एक लाख बालबालिकामध्ये सय जना यस रोगबाट पीडित छन्। दश प्रतिशतको मृत्युको कारण यही समस्या हो। प्रतिष्ठानका अनुसार नेपालमा एक लाख बालबालिकामा प्रति वर्ष ३ सय देखि ५ सय जनासम्म यस रोगबाट पीडित हुने गरेका छन्। हाल नेपालमा ७५ हजार बाथ मुटुरोगी भएको अनुमान छ। Tweet प्रतिक्रिया